Shan carruur ah oo shuban biyood ugu geeriyooday Badhaadhe
In ka badan shan carruur ah ayaa cudurka shuban biyoodka ugu geeriyooday kuwo kalena way la fiifaan tuulooyin hoos yimaada degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose, sida uu Ergo u xaqiijiyay Dr Cabdifataax Cumar oo ka howlgala xarunta caafimaadka Badhaadhe.
Dr Cabdifitaax ayaa sheegay in shanta carruurta dhimatay laga keenau Badhaadhe gudaheed iyo 3da kale oo laga keenay tuulada Kaambooni, halka ilaa 150 qof oo xanuunsanna ay ku jiraan dad waaweyn, tuulooyinka ugu badan ee laga keenayana ay ka mid yihiin Kulbiyow, Kaambooni iyo Buurkaabo.
Wuxuu sheegay in dadka shubanbiyoodku soo ritay oo u badan carruur lagala soo lugeeyo deegaanno fogfog, marka xarunta la keenayana ay yihiin kuwo aad u liita oo inay u dhintaan khatar ugu jira.
Fardowso Maxamed Jaamac oo ah hooyo haysata 8carruur ah oo mid ka mid ah carruurteeda oo gabar ah uu uga dhacay cudurka kugula jirta xarunta ayaa Ergo u sheegtay inay ku aragtay shuban iyo matag ayna u maleysay cudurka malaariyada oo ay daawooyin farmashiga uga soo iibisay oo siisay, markii xaaladdeeda ay kasii dartayna ay usoo qaadday xarunta caafimaadka Badhaadhe.
“Dadka deriska ayaa igu yiri waa malaariya, daawooyinkeedaan usoo iibiyay oon siiyay waxba uma tarin, kadib daawo dhaqameed siiyay way kasii dartay, markaan halkaan keenay ayaa la ii sheegay in shuban biyood uu yahay, waxba kama garaneynin.” Ayay tiri Fardowso.
Dr Cabdifitaax ayaa kula taliyay bulshada inay ilaaliyaan nadaafadda oo uu cudurku ka dhasho, ayna carruurta uu soo ritay marka ay ku arkaay calaamadaha shuban iyo matag ay degdeg u keenaan xarunta caafimaadka, si dhaqso wax looga qabto.